Trump oo la sheegay in uu doonayay in dadka laga helo cudurka corona ee dalkiisa uu geeyo xabsiga laga baqo ee Guantánamo – Calanka.com
Trump oo la sheegay in uu doonayay in dadka laga helo cudurka corona ee dalkiisa uu geeyo xabsiga laga baqo ee Guantánamo
Sida ku qoran buug ay dhawaan soo saareen suxufiyiinta ka shaqeysa jariiradda The Washington Post ayaa waxaa shaaca looga qaaday in Trump uu doonayay in dadka laga helo cudurka corona ee dalkiisa u dhashay balse ku sugan dibedda uu geeyo xabsiga laga baqo ee Guantánamo.
Suxufiyiinta buugan soo saaray oo kala ah Yasmeen Abutaleb iyo Damian Paletta islamarkaana lagu magacaabo «Nightmare Scenario» ayaa looga hadlayaa qaabka uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu u wajahay la tacaalidda cudurka coronavirus ee sannadkii 2020-ka.
” – Malihin miyaa jasiirad gaar inoo ah? Ka warrama Guantánamo?”, sidaa ayuu ku yiri Trump mar uu shir khaas ah la lahaa maamulkiisa kaas oo dhacay 20-bishii Febraayo islamarkaana looga hadlayay sida looga hortagi karo cudurka safmarka ah ee dunida soo food saaray.
Soo jeedintan oo ay fajac ku noqotay xubnihii kale ee shirka ku jiray ayaa waxaa uu Trump hadalkiisa sii raacsaday “Waxaa soo dhoofsaneynaa alaabo, ma soo dhoofsaneyno virus ama caabuq” oo uu ula jeeday in cudurkan oo ka bilowday dalka Shiinaha uu ugu soo gamban karo beecshada dhex marta labada dal.
La taliyeyaashiisa ayaa ka biyo diiday arrintaasi oo sheegay in sumcad-darro ka dhalan karto in muwaadiniin la geeyo xabsi ay ku jiraan argagixiso.
Xabsiga Guantánamo ayaa waxa uu ku yaallaa dalka Cuba, waxaana leh Mareykanka. Waxa ku jira maxaabiis lagu eedeeyay argagixisnimo oo kala kala keenay daafaha caalamka sida Afghanistan, Ciraaq iyo meelo kale.
Waxaa la aas-aasay sannadkii 2002.